Ngaba uyayazi inkonzo yasimahla ye-imeyile 'Booksflash'? | Uncwadi lwangoku
Ndisazingela iinkonzo zasimahla ezincwadini nasezincwadini ngokubanzi kwaye ndiyifumene enokukunceda. Imalunga nenkonzo ye- imeyile yasimahla 'ukubetha kweencwadi'. awuyazi ukuba yintoni? Apha sikuxelela ngokufutshane. Mhlawumbi ukusukela namhlanje uyakufikelela kubuninzi bezibonelelo ngokubeka i-imeyile yakho kumngxunya omncinci.
'I-Bookflash' eyePenguin Random House Grupo yoHlelo
Njengoko isihloko sesi siqendu sisitsho, le nkonzo ndizokuxelela yona ngayo namhlanje yeyika Iqela lePenguin Random House Publishing Group, yenye yezona zinamandla kwinkonzo yokuhlela namhlanje.
I-Bookflash isebenza ngolu hlobo lulandelayo:
Kwiphepha layo eliphambili onokufikelela kulo apha Uya kubona eli candelo lilandelayo elithetha oku: «Shiya i-imeyile yakho kwaye wonwabele abathengisi abathengise kakhulu nge isaphulelo ukuya kuthi ga kwi-80%«. Kulapho kuya kufuneka ubonise idilesi yemeyile yakho ukufumana ezi ntengiso.
Nje ukuba ubonise i-imeyile, iwindow entsha iya kuvela apho kuya kufuneka ubonise khona iintlobo zoncwadi oyithandayo okanye oyifunda kakhulu. Phakathi kwazo kukho ezo isenzo kunye nokuzonwabisa, ezakudala ezibalaseleyo, ezembali, ezopolitiko, ezoqoqosho, ukubalisa okwangoku, inoveli yothando kunye nenkanukoOkwangoku namhlanje, njl. Kufuneka ujonge iibhokisi zalabo ufuna ukufumana izibonelelo.
Ukuqhubela phambili ezantsi uza kufumana elinye icandelo apho bakubuza khona uthenga phi eyakho zasemoyeni. Kuya kufuneka uphawule ukhetho olunye okanye ngaphezulu kubandakanya uKobo, Fnac, njl.
Nje ukuba bagqibe bakubuza uvelaphi kwaye ngubani igama lakho. Kwaye xa yonke into icwangcisiwe kwaye ibonisiwe, uya kunika "gcina ukhetho lwakho".
Nje ukuba kwenziwe oku, uya kufumana i-imeyile yonke imihla ngezaphulelo ezikhoyo ngoku ngokhetho lwakho. Njengoko ubona, inkonzo yasimahla kunye nentofontofo, ekuthi ngamanyathelo onokuthi uhlale unawo kwizaphulelo zoncwadi ezihlala zilungile epokothweni yakho.
Kwaye ngoku ndiyakushiya, ndiza kujonga i-imeyile yam ukuze ndibone ukuba zeziphi izaphulelo zokuqala endinokuzonwabela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ngaba uyayazi inkonzo yasimahla ye-imeyile 'Bookflash'?
Molo ndinengxaki, ndifumana izibonelelo kwii-ebook yonke imihla, kodwa xa ndifuna ukuya kuyo, ndifumana impazamo kwaye ayivuli, ewe! Ndizamile ukungena kwi-Fnac kodwa akhona amanye amaxabiso aphezulu .. ke ngoko andiqondi nto .. nceda nceda !!!